Shir Maanta ka furmaya Garoowe – Radio Baidoa
Shir Maanta ka furmaya Garoowe
Magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal ayaa lagu wadaa in Maanta oo Axad ah uu ka furmo Shirka wadatashiga Maamulka Puntland,kaas oo ay ka qeyb geli doonaan in ka badan 460 ergo oo ka kala yimid dalka Gudihiisa iyo dibadiisa.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa 8-dii Bishii Febaraayo ee sanadkaan Garoowe kaga dhawaaqey Shirka wadatashiga Puntland,waxaana shirka ka qeyb-galaay Wasiirada & Xildhibaannada labada Gole ee ku matalaya Dowladda Federaalka,inta badan mas’uuliyiinta Maamulka Puntland.Odayaal & Waxgarad iyo dad kale oo lagu Casuumey.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa furi doona shirka,isaga oo halkaasi ka jeedin doona khudbad uu kaga hadlayo xaalada siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka kala dhaxeeya Dowladda.
Shirka ayaa waxaa looga hadli doonaan arrimo la xiriira aayaha Maamulka Puntland,khilaafka Dowladda iyo Maamulka Puntland u dhaxeeya iyo jihooyinka siyaasadeed ee la aadayo maadaama dalka uu galayo xilli kala guur ah.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa Magaalada Garoowe kusii qul qulaya wufuud kala duwan,kuwaas oo ka kala imaayaya dalka Gudihiisa iyo dibadiisa,waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in Xubno uu kamid yahay Wasiirka Qorsheynta Xukuumadda Soomaaliya ay diideen ka qeyb-galka Shirkaas.
Wararka kale ee Shirkaasi laga helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in laga mamnuucey inay Shirkaasi ka qeyb-galaan Wariyeyaasha Madaxa bannaan,waxaana Guddiga qabanqaabada shirka ay weriyeyaasha ku wargeliyeen in aan loo ogoleyn ka qeyb-galka Shirkaas.
Sidoo kale shalay Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Puntland qoraal ay soo saartey waxaa ay ku fasaxddey muddada Saddexda Cisho ah oo uu shirka socdo Goobaha Waxbarashada ee ku yaalla Magaalada Dhuusamareeb.
Siweyn ayaa looga dareemayaa Magaalada garoowe Shirka Maanta ka furmaya Magaalada Garoowe,waxaana ku gadaamey duruufo kala duwan oo dhinaca ka qeyb-galayaasha ah,waxaana ku sugan Xubno ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Meyd laga helay duleedka Magaalada Dhuusamareeb